လိင်ပညာရှင်များကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းဟုပြောဆိုခြင်းဖြင့် Porn-induced ED သည်ပြtheနာဖြစ်သည်။ သင့် ဦး နှောက်သည် Porn တွင်ဖြစ်သည်
Sexologists တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဟုဆိုကာခြင်းဖြင့် Porn-သွေးဆောင် ED ငြင်းပယ်သည့်ပြဿနာ Is
2016 ကတည်းကတစ်ဦးရဲတင်းအနီရောင် herring ချက်တွေကိုသို့သူ့ဟာသူနတောဖွစျတယျခဲ့ပြီး ဘလော့ဂ်များ PIED (porn-သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု) တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းဖြင့်ဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းအယူအဆ: အချို့ AASECT sexologists ၏။ မည်သည့်သိပ္ပံနည်းကျထောက်ခံမှုကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိဘဲ, porn-apologists ၏ဤတီးဝိုင်းညစ်ညမ်းကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲဆောင်ဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပါတယ် မဟုတ် အွန်လိုင်း porn နိူးအတွက် coital ED ၏မကြာသေးခင်ကမြင့်တက်နောက်ကွယ်မှ (ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှဖြစ် porn, ညာဘက်?) ။ ဒီတော့ဝေးအမှတ်အသားကိုချွတ်တ-eyed အံ့သြစရာကြွက်မှားသောစိတ်နှင့်ကင်းလွတ်သငျသညျနုပျို ED ၏အကြောင်းရင်းအဖြစ်အဆိုပြုမည်သူမဆိုကြည့်ရှုပါလျှင်သင်လိုလားတဲ့ porn တွန်းအားပေးတဲ့ propagandist နှင့်ဆက်ဆံရာတွင်နေစိတျခနြိုကြောင်း, ထိုတရားခံကြောင်းအကြံပြုချက်ဖြစ်ပါသည် အစီအစဉ် (သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတို့ကသတငျးရထားပြီးသူတစ်ဦး) ။
အဘယ်ကြောင့်ဤပြောဆိုချက်ကို, ကောင်းစွာ, ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည် fishy? ပထမဦးစွာစကားမှန်လိင်ကျွမ်းကျင်သူပက်ကျိ tugging နုပျို ED ဖြစ်စေသောတောင်းဆိုခဲ့ပါဘူး။ ဆက်ဆက်ဆီးရောဂါပါရဂူ, ယောက်ျားရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအတွက်ရှေ့တန်းကျွမ်းကျင်သူများ, မကျင့်။ အမှန်မှာနီးပါးခေတ်သစ် sexology များ၏သမိုင်း၌အဘယ်သူမျှမ (ဤအနည်းငယ် brash sexologists ကယ်တင်) တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအကြောင်းတရားများအစဉ်အဆက်ကအကြံပြုထားပါတယ်ဖြစ်ပါသည် ရှည်ကြာသော လုလင်တို့သည်အတွက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု။
ဤအ propagandists အတိအကျဖော်ပြအတွက်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိမရေနေမြဲနေစဉ် ဘယ်လို အားကစားနည်းသူအားဖြင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်စိတ်ဒဏ်ရာကိုပြင်းထန်စေသဖြင့်ဒဏ်ရာရသူများသည်စိုက်ထူမှုမရရှိနိုင်ပါ။ အကျိုးသက်ရောက်မှုအရဝါဒဖြန့်သူများသည်ငယ်ရွယ်သော ED တိုးတက်မှုအတွက်စိတ်ဒဏ်ရာရရှိမှုအပေါ်အပြစ်တင်နေကြသည်။ ပြနာကငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ယောက်ျားတွေမတုန့်ပြန်နိုင်အောင်စိတ်ဒဏ်ရာဟာအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်တယ် အော်ဂဲနစ် (လွယ်ကူစွာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလှူခြင်းဖြင့်ရောဂါ) ED ။ 500 အောက်မှာလူ ED အတွက် 1000-40% တိုးညွှန်ပြအများအပြားလေ့လာမှုများရှိပါသည်နေစဉ်, အဘယ်သူမျှမလေ့လာမှုပြင်းထန်တစ်ရှူးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဒီကြီးမားတဲ့မြင့်တက်နောက်ကွယ်မှဖြစ်ပါတယ်အကြံပြုထားသည်။ ထိုကဲ့သို့သောပြောဆိုချက်ကိုမသက်သေအထောက်အထားလုံးဝရှိပါတယ်။
porn-သွေးဆောင် ED နှင့်အတူအများစုမှာယောက်ျားနေဆဲ porn နှင့်အတူတစ်စိုက်ထူရနိုင်
porn-သွေးဆောင် ED နှင့်အတူအများစုမှာယောက်ျားတစ်ဦးစိုက်ထူအောင်မြင်ရန်နှင့်နေသမျှကာလပတ်လုံးသူတို့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုနေတဲ့အဖြစ် ... ပဲဒဏ်ငွေအထွတ်အထိပ်မှ masturbate နိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးတည်းဤအချက်ကိုစိတ်ထိခိုက်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအလေ့အထများနားမလည်နိုင်လောက်အောင် ED အတွက်ကြီးမားတဲ့မြင့်တက်နောက်ကွယ်မှသောရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင် debunks ။ ယောက်ျားတစ်ယောက် porn နှင့်အတူတစ်စိုက်ထူအောင်မြင်ရန်ဒါပေမယ့်မရှိဘဲအားလျော့သွားနိုင်လျှင်, ထိုညစ်ညမ်း-သွေးဆောင် ED ပါပဲ။ ဒါဟာအော်ဂဲနစ် ED မဟုတ်ပါဘူး။
သငျသညျပူးပေါင်းလိင်စဉ်အတွင်းသင့်ရဲ့ (သို့မဟုတ်သင့်လက်တွဲဖော်ရဲ့) နှေးကွေးသို့မဟုတ်ပျက်ကွက်စိုက်ထူမယ်ဆိုရင်အံ့သြနေတယ်ဆိုရင် porn ကိုအသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးဆက်များမှာမကြာသေးမီကစမ်းသပ်ကြိုးစားကြ ဆရာဝန်များကအဆိုပြု မဟုတ်ရင် unexplained ED နှင့်အတူ 40 အောက်တွင်လူတို့သညျအဘို့:
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းနှင့်အတူတစ်ဦးတည်း masturbating တဲ့အခါမှာသင့်ရဲ့စိုက်ထူစောငျ့ရှောကျ။ အခြားအခါသမယတွင်, porn မပါဘဲစမ်းပါ။ သင်အလွယ်တကူသော်လည်းမပြုလုပ်ဘဲ, အင်တာနက်ညစ်ညမ်းနှင့်သင်၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အောင်မြင်ရန်နိုင်လျှင်, ထို့နောက်သင့်ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ယင်း၏အသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်နိုင်ပါသည်။
ဘယ်လိုတတျနိုငျသ "တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအလေ့အထများ" အသီးအနှံဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေဒါမှမဟုတ် "flatline"?
သူတို့ porn အသုံးပြုမှု / တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကိုရပ်တန့်သောအခါအညစ်ညမ်း-သွေးဆောင် ED နှင့်အတူနီးပါးအသီးအသီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများတစ်ဦးနှင့်ဆင်တူကြယ်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ အများစုမှာအစီရင်ခံစာအမျိုးမျိုး ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေဒီဂရီ ထိုကဲ့သို့သောလှုံ့ဆော်မှု, စိုးရိမ်စိတ်, အိပ်မပျော်, lethargy, စိတ်ကျရောဂါ, စိတျအပွောငျးအလဲ, ဦးနှောက်မြူများနှင့်ပြင်းထန်သောမတရားသောအဖြစ် porn ကြည့်ရှုရန်။
ရက်သတ္တပတ် ၁-၂ ပတ်အတွင်းတွင်၊ အများအားဖြင့်“ Flatline” ဟုခေါ်သောလိင်အင်္ဂါအာရုံခံစားမှု (သို့) အရွယ်အစားသိသိသာသာကျဆင်းခြင်းနှင့်အတူ libido ပြင်းထန်သောဆုံးရှုံးမှုကိုတွေ့ကြုံနိုင်သည်။ လိုင်းသည်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်မှလပေါင်းများစွာအထိကြာနိုင်သည်။ လူငယ်များတွင် flatline ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဖြစ်နေနိုင်သည်။ လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်အတွင်းလူငယ်များသည် ၁-၃ နှစ်အထိကြာရှည်နေသည့်“ ကြိုးပြတ်များ” ကိုသတင်းပို့ခဲ့သည်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကြောင့်ဤရောဂါလက္ခဏာများကိုမည်သို့ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သနည်း။ သူတို့မလုပ်နိုင်ဘူး
ED တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းဖြင့်ဖြစ်ပေါ်စေသည်မဟုတ်, ဒါပေမယ့်နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်အချို့သောအလေ့အထများနှင့်ဆက်စပ်သောစေခြင်းငှါ
လူငယ်များစွာညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲ Shanks cranked ဖူးဘူးသော်လည်း, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအထူးသဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်များ၏မှန်ကန်သော etiology (အကြောင်းမရှိ) ထုတ်ဖေါ်နိုင်ရန်အတွက်သီးခြားစီထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်။ နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ် (အခက်အခဲတစ်ခုမိတ်ဖက်နှင့်အတူ climaxing), ED နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်အဖြစ်, ထိုကဲ့သို့သော lube မပါဘဲနာရီသို့မဟုတ်သေခြင်းတရား-ချုပ်ကိုင်ဘို့ edging အဖြစ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေစတိုင်မှတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဆက်စပ်ဖြစ်နိုင်သည်။
သို့သော်ပျက်ကွက်နောက်ခံအော်ဂဲနစ်သို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ, စိုက်ထူခြင်းနှင့်လိင်စိတ်နိုးထနုပျိုတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအတွက်ပြဿနာများကိုမဟုတ် သူတို့ porn အသုံးပြုနေသည်မဟုတ်လျှင်။ အလားတူပင်မသက်ဆိုင်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေစတိုင်, porn ကြည့်ရှု၏ရှုထောင့်မှအေးစက်တဦးတည်းရဲ့လိင်တနာတစ်ဦးနှင့်အတူ climaxing အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။
ခံစားနေရသူ supernormally ၎င်းတို့၏အခက်အခဲများအတွက် porn ကိုနှိုးဆွ၏အခန်းကဏ္ဍကိုလျစ်လျူရှု စိုးရိမ်. ကဒီနေ့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်၏ဇစ်မြစ်ခွဲခြားစောင့်ရှောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပါပဲ။
တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသည်ဆယ်စုနှစ်များစွာအကျိုးရှိသောအဖြစ်မွှမ်းတင်လျက်ရှိသည်သော်လည်း, 15 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း (မိတ်ဖက်နှင့်အတူ) erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှုန်း2အောက်မှာလိင်တက်ကြွလူ (5-40%) မှုမရှိခြင်းကိုခဲ့ကြသည်။ streaming များညစ်ညမ်း၏ထွန်းကတည်းကသုတေသီများဒီတူညီတဲ့အသက်အရွယ်အုပ်စု 30% သကဲ့သို့မြင့်မားသောနှုန်းသတင်းပို့ပါ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်ဆံရေးမျိုးပြဿနာများနှင့်အတူညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု correlating အနိမ့်လိင်စိတ်နှင့်သုတေသန၏နှုန်းထားများ လည်းမြင့်တက်ပါပြီ.
ယူဆရအသက်ကြီးထက်နည်းပါးလာနှစ်ပေါင်းဒုံးပျံ polishing ခဲ့ကြသူလူပျို, မကြာခဏလိုအပ်ပါတယ် ရှည် အစစ်အမှန်မိတ်ဖက်များနှင့်အဘယ်သူ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ template ကိုကြိုတင် 2007 အတွက် streaming များညစ်ညမ်း၏ထွန်း (မသက်ဆိုင်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကြိမ်နှုန်း၏) ဖွဲ့စည်းယောက်ျားထက်သာမန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုများအတွက်ပုံမှန်အလိုဆန္ဒ recover ရန်။ ဤသည်အထူးသဖြင့်လူငယ်အတွက်နုပျိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်မှပံ့ပိုးနေသည်, ထိုညစ်ညမ်း-အေးစက်အကြံပြုထားသည်။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းသော့ကို variable ကိုကြောင်းသက်သေအထောက်အထားတစ်ခုဒီကဗျာ bit နဲ့တစ်ဦးထံမှလာ အီတလီလေ့လာမှု သောအထက်တန်းကျောင်းကျကွီးရှယျအိုမြားအနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအကြောင်းမေးခဲ့ကြသည်။ တစ်ချိန်ကတစ်ပါတ် Non-စားသုံးသူအတွက် 16% နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, အစီရင်ခံထက်ပိုပြီးအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုသောသောသူတို့၏အမျိုးအ 0% ။
တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအစဉ်အဆက်စေခဲ့ပါတယ်သည့်အခါ တစ်ဦး9လဆန့်ကျင်ဘက်ကာလ နှစ်ဆယ်ထဲမှာတစ်ခုခု?
ဘယ်တော့မှမ။ အဖြစ်မှန်စိတ်ပျက်အချို့ညစ်ညမ်း-apologist sexologists မကြုံစဖူးနုပျို ED "ရုံဆန့်ကျင်ဘက်ကာလ" (သုတ်ရည်လွှတ်ပြီးနောက်အကျဉ်း, သဘာဝကျချိန်) ကြောင်းအခိုင်အမာ။ တကယ်လား? အဘယ်ကြောင့်ထို့နောက်များမှာ လနှင့်လအတွင်းလိုအပ်နေအချို့လုလင်တို့သည် porn မှတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းမရှိဘဲ recover သလော အဘယ်ကြောင့်သူတို့အဘို့အသညျ့အနိမ့်ဆွဲဆောင်မှုသတင်းပို့ကြသည် အစစ်အမှန်မိတ်ဖက်? အဘယ်ကြောင့်သူတို့ကဘဲကဘဲ, အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစေရန်စိုက်ထူရနိုင်မလဲ?
သို့တိုင်သည်အခြား sexologists doggedly မိတ်ဖက်နှင့်အတူအားလုံးနုပျို ED တစ်ခုတည်းကိုသာကြောင်းခေတ်မမီတော့ယူဆချက်ကြက်တူရွေးသို့ရာတွင်လုလင်တယောက်သည်ပုဂ္ဂလိကအတွက်ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲ masturbate မနိုင်လျှင် "စွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်စိတ်။ " - ပေမယ့်ပုဂ္ဂလိက masturbating ရုံဒဏ်ငွေလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ် နှင့် မိမိလက်နှင့် "ဖျော်ဖြေတဲ့အခါမှာစိုးရိမျ" အင်တာနက်ညစ်ညမ်း, ဒါဟာသူ့ရဲ့ပြဿနာကောက်ချက်ချဖို့နည်းနည်းအချိန်မတန်သည်မဟုတ် "ဟုစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်?" သူလား?
သို့သျောလညျးနောကျတစျ AASECT sexologist ရေးသားခဲ့သည် ကြောင်းကယ့်ကိုသူကပေါ်မယ့်အဘယ်အရာကိုထွက်ရှာတွေ့မှ "လူပျိုတို့ porn စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် masturbate ပါဘူးတဲ့လေ့လာမှုကိုမြင်ချင်ပါတယ်။ " ဟုသူကဘယျလိုစဉျးစားတှေးချေါဆိုနိုငျသနညျး ပန်းတိုင်ကယ့်ကိုသွားမယ့်အဘယ်အရာကိုရှာဖွေလျှင်, ပိုကောင်းတဲ့လေ့လာမှုဒီဇိုင်းကိုဘယ်တော့မှ (သို့မဟုတ်အလွန်ခဲ) ရှိသည်သောလူတို့အား ED နှင့်အတူအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများကိုနှိုင်းယှဉ်မဟုတ်ဘူး masturbating သည့်အခါအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသော?
သို့မဟုတ်ပင်ပိုကောင်း, unexplained ED နှင့်အတူငယ်ရွယ် porn အသုံးပြုသူများသည်တစ်ဦးတိုးချဲ့အချိန်များအတွက် porn အသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပစ်နှင့် (porn-သုံးပြီးထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက) ရလဒ်တွေကိုစောင့်ကြည့်ကြသည်။ သူတို့ရဲ့ပညာရေးငွေလွှဲလျှင်, porn အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကသုတေသီများပထမဦးဆုံးအနည်းငယ်လေ့လာမှုများအတွက်ဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာင် ဤစာမျက်နှာတွင်။ ဒီလေ့လာမှုတွေနှင့်အညီ, YBOP အင်တာနက်ညစ်ညမ်းတက်ပေးခြင်းအားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အနာကိုငြိမ်းစေကြသူလူထောင်ပေါင်းများစွာ Self-အစီရင်ခံစာများစုဆောင်းခဲ့သည်။
မကြုံစဖူးနုပျို ED နောက်ကွယ်မှ "စစ်မှန်သော" ပြဿနာတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသောအရေးဆိုမှုသမျှမျှထောက်ခံမှုရှိပါတယ် မည့်အစား အွန်လိုင်း (သို့မဟုတ် VR) porn ။ ဇီဝကမ္မ, ဘယ်လောက်ကောင်း Ole ပြုပါ-It-ကိုယ့်ကိုကိုယ်နိုင်မည်ကိုမှန်ကန်မိတ်ဖက်တွေနဲ့တွေ့ဆုံမရှိတော့နှိုးဆွနေကြတယ်ဒါကြောင့်လေးနက်ဖြစ်ကြောင်းအချို့သောအသုံးပြုသူများသည် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတင်းပလိတ်များအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုရှင်းပြ pleasuring? သူတို့ဘယ်လိုအချို့လူပျိုတို့သတင်းပို့နေသောကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်တိုးရှည်လျားပြန်လည်နာလန်ထူအဆရှင်းပြနိုင်မည်နည်း
ခိုင်မာသော၊ မလိုလားအပ်သော ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ နိုးကြားမှုပုံစံများကို ပြောင်းလဲခြင်းသည် ဦးနှောက်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်အချာများကို ပြောင်းလဲမှုများ ရှိနေခြင်းကို ဖော်ပြသည်။ တစ်ကိုယ်ရည် အာသာဖြေခြင်း စက်ပြင်များ တစ်ခုတည်းအတွက် ၎င်းတို့အတွက် တွက်ချက်၍ မရပါ။ သက်ရောက်မှုရှိသူများသည် ယနေ့ခေတ်တွင် ပုံမှန်မဟုတ်သော လှုံ့ဆော်မှုပေးသည့် streaming (နှင့် virtual reality) porn ဖြင့် ၎င်းတို့၏ လိင်စိတ်အား (သူတို့၏ ဦးနှောက်ကို ပြန်လည်လေ့ကျင့်ပေးသည်) ကို မရည်ရွယ်ဘဲ ပြန်လည်သတ်မှတ်ပေးပါသည်။
အဆိုပါမတူဘဲအယူအဆမှာ "supernormally porn ကိုနှိုးဆွခြင်းဖြင့်ပြောင်းလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ template ကို" အတွက်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာသိပ္ပံနည်းကျထောက်ခံမှုရှိရဲ့သီအိုရီ "တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ ED ဖြစ်ပေါ်စေသည်" ။ လာမယ့်အပိုင်းများနှင့်အပေါ်စာရင်းကိုကြည့်ရှုပါ ဒီစာမျက်နှာ.
ကမ္ဘာတဝှမ်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များ, porn ရဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုများ၏လက်တွေ့ဘဝ addressing သူတို့ရဲ့လူနာများကိုကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေသတင်းပို့နှင့်ထိုကဲ့သို့သောသင်္ချိုင်းတွင်းကို, မကြုံစဖူးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ် 40 အောက်မှာအမျိုးသားများတွင်ဖွံ့ဖြိုးနိုင်ဘယ်လို theorizing နေကြသည်။ အောက်ပါစဉ်းစားကြည့်ပါ:
တစ်ဦး 2016 စက္ကူခုနှစ်တွင် Sexologies အတွက်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ စိတ်ရောဂါရောဘတ် Porto, MD Sexology ၏ဥရောပအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ, ထိုတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသည် (ထပ်တလဲလဲ) ဖော်ပြထား "အန္တရာယ်ကင်းနှင့်ပင်အထောက်အကူဖြစ်စေ။ " သို့သော်အလွန်အကျွံနှင့်ဆိုက်ဘာ-ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုဖြင့်လိုက်ပါသွားသောကြောင့် "ဟုအခန်းကဏ္ဍမှမြင်ကြလျက်ရှိသည်သည့်အခါ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုသို့မဟုတ် coital anejaculation အချို့အမျိုးအစားများ၏ etiology ၌တည်၏။ ထိုအပြင်းထန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်နှင့်အတူ 35 လူနာအပေါ် "ပေါ်တိုရဲ့လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာများ, ဘယ်သူကို၏ 19 ကျယ်ပြန့်ကုသမှုအပြီးကျေနပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုလာတယ်။ စကားမစပ်, စွဲကြသည်မဟုတ်သူကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်ညစ်ညမ်း-related လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲများအတွက်အန္တရာယ်မှာလည်းဖြစ်ကြသည်။
အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေသလဲ? လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူတစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (2016), ဆီးရောဂါပါရဂူများနှင့်စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်နှစ်ဦးစလုံးအပါအဝင်ဆရာဝန်တွေ, အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့, ပြန်လည်သုံးသပ်ကျယ်ပြန့်သိပ္ပံဆိုင်ရာစာပေအဖြစ်သုံးကိစ္စတွင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ သူတို့ကအလွယ်တကူ real- မှပြောင်းလဲမအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုရှုထောင့်မှလိင်စိတ်နိုးထအခြေအနေဖို့လုံလောက်တဲ့အစွမ်းထက်ဖြစ်မည်အကြောင်းအဆိုပြုထားအင်တာနက်ညစ်ညမ်းရဲ့ထူးခြားတဲ့ဂုဏ်သတ္တိ (အဆမဲ့အသစ်အဆန်း, စတာတွေကပိုလွန်ကဲပစ္စည်း, ဗွီဒီယို format နဲ့, ရန်လွယ်ကူတင်းမာမှုများအတွက်အလားအလာ) ကိုးကား ဘဝမိတ်ဖက်။ အဆိုပါဆရာဝန်များကကြည့်ရှုရှောင်နှင့်အတူကြည့်ရှု၏နှိုင်းယှဉ်သုံးပြီးထို့အပြင် / လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်နဲ့ဆက်စပ် key ကိုဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများထပ်မံလေ့လာမှုအကြံပြုသည်။ (မှတ်ချက်: ဤစာရွက်လည်းတရားဝင် porn-သွေးဆောင် ED "debunk" ကိုတပါတည်းယူဆောင်နှစ်ခု sexology စာတမ်းများ critiques ။ )
ဆီးရောဂါပါရဂူ Tarek Pacha "ခေါင်းစဉ်, San Diego မှ,, CA အတွက်အမေရိကန်ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအစည်းအရုံးရဲ့ 2016 နှစ်စဉ် conference မှာသူ၏အပေါင်းအဘော်ကဆရာဝန်များတစ်ဦးတင်ဆက်မှုကိုအပ်ညစ်ညမ်းသွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (PIED): အဆိုပါနယ်ပယ်, သိပ္ပံနှင့်ကုသမှုကိုနားလည်ခြင်း။ "
ယနေ့အထိ, 110 + လေ့လာမှုများ link ကိုညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာကိုအသုံးပြုခြင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှနိမ့် arousal နှင့်ဆင်းရဲတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှု။
အထက်ပါလေ့လာမှုများအပြင်, ဒီစာမျက်နှာ 140 ကျွမ်းကျင်သူများကကျော်အားဖြင့်ဆောင်းပါးများနှင့်ဗီဒီယိုများကိုပါရှိသည် အသိအမှတျပွုနှင့်အောင်မြင်စွာ porn-သွေးဆောင် ED နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်အရှုံးကုသကြသူ (urology ပါမောက္ခ, ဆီးရောဂါပါရဂူ, စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်, စိတ်ပညာရှင်, sexologists, MDS) ။
ဤအပိုင်း၏အောက်တွင်သင်သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုထိန်းချုပ်ခြင်းသည်အဘယ်ကြောင့်မလိုအပ်ကြောင်းကိုပြသထားသောအာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင် / ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောကောက်နှုတ်ချက်နှင့်ဆွေးနွေးမှုကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။
ကြီးထွားလာသည့်အထောက်အထားများအရအသက် ၄၀ အောက်ရှိသောယောက်ျားများသည်မကြုံစဖူးထူးခြားသော ED နှင့်အတူမိတ်ဖက်လိင်များနှင့်မပတ်သက်သောအင်တာနက် / virtual reality ရုပ်ပုံများကိုအထွတ်အထိပ်ရောက်သည်ဟုဖော်ပြသည်။ ထပ်မံ၍ ကြည့်ရှုခြင်းကာလအတွင်းပိုမိုအစွန်းရောက်သည့်ပစ္စည်းများသို့အလွယ်တကူမြှင့်တင်ခြင်း၊ အဆုံးမရှိသောအသစ်အဆန်း၊ အလွန်တရာနှိုးဆွသောဖြန့်ဝေမှုပုံစံများစသည့်ညစ်ညမ်းသောဝိသေသလက္ခဏာများသည်အချို့သော ဦး နှောက်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတင်းပလိတ်များကိုအဓိကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်စေမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်နည်းလမ်းများနှင့်ပြောင်းလဲရန်စိန်ခေါ်လျက်ရှိသည်။
လည်းရှိပါတယ် ကြီးထွားလာသက်သေအထောက်အထား ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုနည်းပါးသော“ desensitization” ကိုပိုမိုသက်သေပြသည်။ တကယ်တော့၊ (ဒီဂျစ်တယ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုချန်ထားခြင်းအားဖြင့်) ပြန်လည်နာလန်ထူသူများသည်အော်ဂဇင်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုစတင်ကြောင်းသတင်းပို့ခြင်းသည်ပုံမှန်မဟုတ်သောအရာမဟုတ်ပါ ခံစား ပို။ ပျော်စရာ။ သူတို့မထွက်ခွာမီသူတို့၏စိတ်နှိုးဆွမှုအများစုသည် (ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ဆက်စပ်သည့်အချက်အလက်များကို) တုံ့ပြန်ခြင်းနှင့်လိင်မှုဆိုင်ရာအသစ်အဆန်းကိုရှာဖွေခြင်းတို့မှမျှော်လင့်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည် (အများအားဖြင့်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုခြင်းထက်ဆေးလိပ်ဖြတ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသော) စွဲသူများအနေဖြင့် dopamine သည်အမှန်တကယ်အသုံးပြုရန်ထက် cues အတွက်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ ဒီဟာမောင်းနိုင်ပါတယ် ဒစ်ဂျစ်တယ် porn အသုံးပြုသူများသည်အတွက်တင်းမာမှုလျှော့ချ.
အတိုချုပ်ဆိုရလျှင်၎င်းသည်အလွန်အကျွံသုံးခြင်း (နှင့်ဆက်စပ်သောပြproblemsနာများ) ကိုမောင်းနှင်သည့် buzz ကိုရှာဖွေခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအသံသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ညစ်ညမ်းမှုရှာဖွေခြင်းမှလာသည် - မဟုတ် (အကြီးစားအသုံးပြုသူများအတွက်) တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေကနေ။ ဤအဖြစ်မှန်က“ ပြတ်တောက်သွားခြင်းသည်ပြproblemနာဖြစ်သည်” ဟူသောအကြံပြုချက်၏တိုတောင်းလှမှုကိုဖော်ပြသည်။
သူတို့ရဲ့ပညာရေး၏နောက်ခံအကြောင်းရင်းနှင့် ပတ်သက်. porn စားသုံးသူရှုပ်ထွေးဖို့ဒါဟာလက်ရှိမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအတွက် Kinsey Institute ကမှာလေ့ကျင့်သင်ကြားအချို့အပါအဝင်လိုလားသော porn sexologists ကထွက်သယ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။ ဖြစ်ချင်တော့ပါကပထမဦးဆုံးအညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်အနိမ့်အလိုဆန္ဒနှင့်အလျှော့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်၏ဖြစ်ရပ်အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အဘယ်သူသည် Kinsey sexologists ပဲ!
2007 ခုနှစ်, Kinsey သုတေသီများသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည် ဗီဒီယိုကိုညစ်ညမ်းရှိရာအရက်ဆိုင်များနှင့် bathhouse ကနေစုဆောင်းဘာသာရပ်များ၏တစ်ဝက်, "ပျံနံ့," ကဗီဒီယိုညစ်ညမ်းတုံ့ပြန်အတွက်ဓာတ်ခွဲခန်းများတွင်စိုက်ထူအောင်မြင်ရန်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။ အဆိုပါဘာသာရပ်များမှပြောနေတာခုနှစ်, သုတေသီများညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများမြင့်မားသောထိတွေ့မှုပုံအောက်ပိုင်း Response နှင့်ပိုပြီး, အစွန်းရောက်အထူးပြုသို့မဟုတ်နှိုးဆော်ခြင်းဖြစ်လာဖို့ "kinky" ပစ္စည်းတစ်ခုတိုးလာလိုအပ်နေဖြစ်ပေါ်ကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါသုတေသီများသည် ပို. ပင်မတူညီကလစ်များပါဝင်သည်နှင့်အချို့သော Self-Selection ကိုခွင့်ပြုပေးဖို့ဟာသူတို့ရဲ့လေ့လာမှုဒီဇိုင်း။ သင်တန်းသားများကို '' လိင်အင်္ဂါ၏လေးပုံတပုံပါသေးပုံမှန်အားကိုတုံ့ပြန်ခဲ့ပါဘူး.
ကြောင်းလေ့လာမှုမှာသုတေသီဆက်ဆက်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေစတိုင်သို့မဟုတ်အကြိမ်ရေအားနည်းစိုက်ထူရှင်းပြခဲ့ကြောင်းအကြံပြုခဲ့ပါဘူး! အွန်လိုင်း porn streaming ကျယ်ပြန့်မရရှိနိုင်ခဲ့မီကပင်သူတို့ဘာသာရပ်များမှာစုဝေးရှိရာအရက်ဆိုင်များတွင်ထူးခြားပစ္စုပ္ပန်ခဲ့ပြီးသော - သူတို့ဟာပျံနံ့ porn နှင့်အမျိုးမျိုးမှအစားထောက်ပြသည်။ ဝမ်းနည်းစရာနှင့်တာဝန်မဲ့သူတို့နောက်ထပ်ဒီမငြိမ်, ဝတ္ထုဖြစ်စဉ်စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့မရွေးချယ်ခဲ့တယ်။
သူတို့နှင့်သူတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များဒါခိုင်မြဲစွာ "လိင် positive" သူတို့ကဒီဖြစ်စဉ်သုတေသနပြုရန်ငြင်းဆန်ပေမယ့်ယခု bopping ရန်ပြောကြားခဲ့သည်ဖွငျ့ကြှနျုပျတို့ကိုလှည့်ဖြားဖို့ကြိုးစားမသာကြောင်းနာတာရှည် ED နှင့်မူမမှန်အနိမ့်အလိုဆန္ဒနှင့်တူပြင်းထန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်၏လိုလားသူ porn ငြင်းပယ်လိုအပ်သည်ဖျောင်းဖျခဲ့ကြသည် Bologna မဟုတ်ဘဲညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်?
အောက်ခြေလိုင်း: လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်အရေးတကြီးလူ့လိင်နှင့်ယနေ့ထူးခြားတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်၏သက်ရောက်မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အသံသိပ္ပံ (နှင့် neuroscience) ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်တဲ့သူသုတေသီများလိုအပ်ပါသည်။ အနီရောင် herrings ထ်ထမ်းဆောင် propagandists မဟုတ်ပါဘူး။
ယခုအဘို့, ဘုံသဘောမျိုး (နှင့်တည်ဆဲ အစိုင်အခဲသုတေသန) အစေခံရမည်ဖြစ်သည်။ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး commented တစ်ဦးပြန်လည်နာလန်ထူဖိုရမ်အဖြစ်:
လူတွေက Porn-Induced ED ကိုဘယ်လိုသတိမထားမိကြတာလဲ။ ညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်တိုင်း၏စာမျက်နှာတိုင်းတွင် boner pill များအတွက်ကြော်ငြာများရှိသည်။ ညစ်ညမ်းသောကုမ္ပဏီသည်သင်၏ဒစ်ကိုချိုးဖျက်နိုင်သည့်နေရာတိုင်းတွင်သင်နှိပ်သည့်အခါတိုင်းအမြတ်အစွန်းရရှိသည်။ (သင်၏နစ်ခ်ကိုသင်ချိုးဖောက်နေကြောင်းသိရှိခြင်း၊ နေရာတကာရှိ boner pill ကြော်ငြာများအားလုံးသည်) ထို့နောက်သင်၏ boner pill ကိုနှိပ်ခြင်းမှလည်းအကျိုးရရှိသည်။ သင်၏အွန်လိုင်းစီးကရက်အမိန့်များကိုအကျိုးအမြတ်ယူစဉ်၊ နာတာရှည်အဆုပ်ရောဂါနှင့်အဆုတ်အစားထိုးကုသမှုများအတွက်ကြော်ငြာများရှိနေစဉ်ဖိလိပ္ပု Morris နှင့်ဆင်တူသည် သင့်ရဲ့ပျက်စီးအဆုတ်။
ဒီထောက်ခံအားပေးမှုမရှိတဲ့စကားပြောကိုတီထွင်ခဲ့တဲ့ porn လိုလားသူ PhD ရဲ့
ဒါဟာ meme ဒါဝိဒ်သည် Ley အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးခဲ့ပုံပေါ်နှင့် နီကိုးလ် Prause, တွင် ဤဆောင်းပါးတွင် Prause erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူညစ်ညမ်းစွဲ correlating ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များကလေ့လာမှုအပေါ် comments:
Plus အား, ဒီလေ့လာမှု peer-ပြန်လည်သုံးသပ်သို့မဟုတ်တရားဝင်သေးထုတ်ဝေခဲ့သေးပါဘူး, နီကိုးလ် Prause, Ph.D ဘွဲ့ကို, Liberos ကိုတည်ထောင်သူ, Los Angeles မြို့မှာရှိတဲ့လိင်သုတေသနနှင့်ဇီဝနည်းပညာကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်။
တကယ်ရှိမရှိအမှန်တကယ်အကြားမျှခွဲခြားမှုလည်းမရှိ porn လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုဖြစ်စေတဲ့သို့မဟုတ်များ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ရပ်လျှင်ဖြစ်ပါတယ် တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ သူမထောက်ပြသည်။
သူတို့ porn-they're တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကိုစောင့်ကြည့်သည့်အခါ "လူတွေကပေါက်ပေါက်စားခြင်းမရှိပါ။ အဘယ်အရာကိုဆိုလိုသည်, သင်အမြဲအခြားအပြုအမူနှင့်အတူဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အမူအကျင့်များအခါတိုင်း, သင်နှစ်ခု၏သက်ရောက်မှုခွဲခြားလို့မရပါဘူး "ဟုသူကရှင်းပြသည်ဖြစ်ပါတယ်။ "သူတို့ကသူတို့လေ့လာတွေ့ရှိသက်ရောက်မှုများကိုညစ်ညမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းပြောစရာအကွောငျးမရှိပါ။ သူတို့ဟာနည်းတူကောင်းစွာတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေမှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏သက်ရောက်မှုကိုဖယ်ရှားစမ်းသပ်မှုတစ်ခုဒါမှမဟုတ်ကစာရင်းအင်းဖြစ်စေ, အထူးသကြောင်းလေ့လာရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။ "
ထိုနေ့သည်ဒါဝိဒ် Ley တွင် အောက်ပါ tweets တူညီသောလေ့လာမှုမှာ about:
Porn နှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုမကြာခဏအသုံးပြုခြင်းသည်သင်၏လိင်ဘဝကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ သို့သော်သင့်ကို“ မထိန်းချုပ်” နိုင်ပါ။ မင်းကိုသင်ထိန်းချုပ်ထားတယ်။
Ley သည်လူငယ်များတွင်နာတာရှည် ED ကိုပုံမှန်ဖြစ်အောင်လုပ်သည့်အခြားတွစ်တာတစ်ခုနှင့်အတူလိုက်သည်။ Ley တစ် ဦး မှတုံ့ပြန်ခဲ့သည် ဂါးဒီးယန်းသတင်းစာဆောင်းပါး နုပျို erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက်ကြီးမားတဲ့မြင့်တက်အကြောင်းကို (porn တစ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းပြောကြားခဲ့ကြသည်ခံ):
အာမင်၊ ငါ ED ကိုကုသတဲ့အခါယောက်ျားတွေဟာသူတို့ရဲ့ဒစ်ကိုမပတ်သတ်တဲ့ကမ္ဘာကြီးအကြောင်းကိုစဉ်းစားဖို့လူတွေကိုဖိတ်ခေါ်တယ်။ ”
ကံမကောင်းစွာ Ley ၏ဖောက်သည်များအတွက်သူသည်ငယ်ရွယ်သောကျန်းမာသောအမျိုးသားများတွင်ညစ်ညမ်းခြင်းကိုအသုံးပြုခြင်းကို ED ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအကြောင်းရင်းအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ porn ပေမယ့်ဘာမှ။
အဘယ်အရာကို Ley နှင့် Prause နှင့်အတူကဒီမှာသွားနေသနည်း
Prause တစ်ဦးနှင့်အတူဟောင်းတစ်ဦးပညာသင်နှစ်ဖြစ်ပါသည် ရှည်လျားသောသမိုင်း စာရေးဆရာ, သုတေသီများ, ကုသ, သတင်းထောက်များကို, ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်ယောက်ျား, ဂျာနယ်အယ်ဒီတာများ, မျိုးစုံအဖွဲ့အစည်းများ, နှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကနေပျက်ဆီးအထောက်အထားအစီရင်ခံရန်ဝံ့သူကိုအခြားသူများကနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့် defaming ၏။ Prause တစ်ဦးလဲဆင်နွှဲခဲ့ပါသေးတယ်တော်မူပြီးမှ, PIED debunking နှင့်အတူစွဲလမ်းနေသည် ဒီပညာရေးဆိုင်ရာစာရွက်ဆန့်ကျင်3နှစ်စစ်ညစ်ညမ်းသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်မှုများမှပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသည့်လူငယ်များကိုတစ်ပြိုင်တည်းနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်ခြင်းများပြုလုပ်သည်။ စာရွက်စာတမ်းများကိုကြည့်ပါ။ ဂါယူဆပါသည် #1, ဂါယူဆပါသည် #2, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #1, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #2, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #3, နောဧသည်ဘုရားကျောင်း, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #4, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #5, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #6, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #7, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #8, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #9, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes # 10, အဲလက်စ် Rhodes # 11, Gabe Deem & Alex Rhodes # 12 အတူတူ, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes # 13, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #14, Gabe # 4, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #15.
သူမသည်ဖြစ်ပေါ်လာသော အဆိုပါညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူအတော်လေးအဆင်ပြေနေ, ဒီထဲကနေမြင်နိုင်ပါသည်အဖြစ် X-အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်ဝေဖန်သူများအဖွဲ့အစည်း (XRCO) ဆုအခမ်းအနား၏အနီရောင်ကော်ဇောပေါ်သူမ၏၏ပုံရိပ် (ညာဘက်အစွန်ဆုံး)။ (ဝီကီပီးဒီးယားအဆိုပါအဆိုအရ XRCO ဆုပေးပွဲ အမေရိကန်ကပေးတဲ့နေကြတယ် X-အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်ဝေဖန်သူများအဖွဲ့ နှစ်စဉ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဖျော်ဖြေရေးအတွက်အလုပ်လုပ်လူများနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းဆုစက်မှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များအတွက်သီးသန့် reserved ပြသတစ်ခုတည်းသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူဖြစ်ပါတယ်။) ။ ဒါဟာအစ Prause ရှိစေခြင်းငှါပုံပေါ် ဘာသာရပ်များအဖြစ်ရရှိသော porn အဆိုတော် အခြားညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းအကျိုးစီးပွားအုပ်စုတစ်စုကတဆင့်, အ အခမဲ့ခွန်းညွန့်ပေါင်း။ FSC မှရရှိသောဘာသာရပ်များကိုသူမတွင်အသုံးပြုခဲ့သည် ငှားရမ်း - သေနတ်လေ့လာမှု ထိုအပေါ် အကြီးအကျယ်စှနျး နှင့် အလွန်စီးပွားဖြစ်ဖြစ်သော“ Orgasmic Meditation” အစီအစဉ် (ယခုဖြစ်ခြင်း FBI ကစုံစမ်းစစ်ဆေး) ။ ချီးမွမ်းခြင်းကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့သည် မထောက်ပံ့တောင်းဆိုမှုများ အကွောငျး သူမ၏လေ့လာမှုများ၏ရလဒ်များကို နှင့်သူမ၏ လေ့လာမှုရဲ့နည်းစနစ်။ ပိုပြီးစာရွက်စာတမ်းများအဘို့အတွေ့: နီကိုးလ် Prause သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအတွက် Porn စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအားဖြင့်ဖြစ်သနည်း
နီကိုးလ် Prause, သူမ၏ကိုယ်ပိုင်ဝန်ခံချက်အသုံးပြုပုံပြင်းထန်စွာ porn စွဲများ၏ concept ကိုပယ်ချလိုက်သည်။ တစ်ဦးအနေဖြင့်ဥပမာ, ကိုးကား မာတင် Daubney ဆောင်းပါး လိင် / ညစ်ညမ်းစှဲမှာ about:
ဒေါက်တာနီကိုးလ် Prause, Los Angeles မြို့မှာရှိတဲ့လိင် Psychophysiology နှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေအာရုံကြောသိပ္ပံ (Span) ဓာတ်ခွဲခန်းမှာကျောင်းအုပ်ကြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူး, လိင်စွဲလမ်းတဲ့ "ပရော်ဖက်ရှင်နယ် debunker" သူ့ကိုယ်သူခေါ်ဆိုသည်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, နီကိုးလ် Prause ဟောင်း တွစ်တာဆောင်ပုဒ် သူမသိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသနများအတွက်လိုအပ်သောဘက်မလိုက်မှုကင်းမဲ့ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြသ:
“ လူတွေဘာကြောင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေလုပ်ဖို့ရွေးချယ်တာလဲဆိုတာကိုလေ့လာခြင်း စွဲဒဏ်ဍာရီသွန်းလောင်းပေးခြင်းမရှိဘဲ"
ဒါဟာနီကိုးလ် Prause "လိင်စွဲလမ်း" ဆန့်ကျင် (ကအခကြေးငွေများအတွက်) သူမ၏ "ကျွမ်းကျင်သူ" သက်သေခံချက်လှူသောမှတ်သားရပါမည်။
Prause မှအကျိုးသူမ၏န်ဆောင်မှုများရောင်းချလျက်ရှိသည်သော်လည်းကြောင့်ဖြစ်ပုံရသည် ပြောဆိုထားသည် သူမ၏နှစ်ခု EEG လေ့လာမှုများ၏ဆန့်ကျင်ညစ်ညမ်းစွဲကောက်ချက် (1, 2), မြောက်မြားစွာ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှုနှစ်ဦးစလုံးလေ့လာမှုများကို (စွဲမော်ဒယ်ကိုထောကျပံ့ပြောပါသော်လည်းသံမဏိ et al။ , 2013: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prause et al။ , 2015: 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9။ ) ။
ဒါဝိဒ်သည် Ley ဘာသာရေးအရလိင်နှင့်ညစ်ညမ်းစွဲနှစ်ဦးစလုံးငြင်းဆိုနှင့် 30 ကျမ်းစာ၌ရေးထားသို့မဟုတ်ဒီတော့ဘလော့ဂ်ပို့စ်များကိုညစ်ညမ်း-ပြန်လည်နာလန်ထူဖိုရမ်များတိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းစွဲများနှင့်ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင် ED ထှကျသှားစပွေီးသိရသည်။ အကျိုးစီးပွားတစ်ဦးဗြောင်ကျကျဘဏ္ဍာရေးပဋိပက္ခများတွင် ဒါဝိဒ်သည် Ley ဖြစ်ပါသည် porn စက်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီးက X-ဟမ်းစတားများကလျော်ကြေးငွေခံရ ၎င်းတို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များကိုကြော်ငြာရန်နှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်လိင်စွဲလမ်းမှုသည်ဒဏ္sာရီဖြစ်သည်ဟုသုံးစွဲသူများကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်။ အထူးသဖြင့် David Ley နှင့်အသစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည် လိင်ကျန်းမာရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့ (SHA) ရှိ တစ်ဦးက X-ဟမ်းစတားက်ဘ်ဆိုက်နှင့်အတူပူးပေါင်း (မြှောင်-Chat ကို) ။ မြင် "Stripchat သင့်ရဲ့စိုးရိမ်ပူပန် porn-ဗဟိုပြုဦးနှောက်လေဖြတ်ဖို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးမဟာမိတ်တွေနဲ့ aligns":
နောက်ဆုံးအနေနဲ့, ဒါဝိဒ်သည် Ley မှတဆင့်ပိုက်ဆံစေသည် ကျဲအိုနှီးနှောဖလှယ်ပွဲသူကအရာမဆငျမခွ (ထိုစွဲလမ်း-deniers '' သဘောတရားသည်သူ၏နှစ်ခုစာအုပ်တွေထဲမှာထွက် set ကိုအားပေးအားမြှောက်ဘယ်မှာ လေ့လာမှုများရာပေါင်းများစွာလျစ်လျူရှု နှင့်အသစ်၏အရေးပါမှု compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Disorder ရောဂါ ) ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့အဖြေရှာတဲ့ကို manual ထဲမှာ။ Ley porn သူ၏တဖက်သတ်အမြင်များ featuring ကသူ၏များစွာသောဆွေးနွေးပွဲများများအတွက်လျော်ကြေးငွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ 2019 တင်ဆက်မှုများတွင် Ley ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုထောကျပံ့ခြင်းနှင့်မြှင့်တင်ရန်ပေါ်လာသော: အပြုသဘောဆောင်သောလိင်နှင့်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအတွက်တာဝန်ရှိညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုဖွံ့ဖြိုးဆဲ.
အာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင် / MD မှပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသည်“ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုထိန်းချုပ်ခြင်း” သည်အဘယ်ကြောင့်မလိုအပ်ကြောင်းဖော်ပြသည်
အောက်ကကောက်နုတ်ချက်ကရှင်းပြသည်အဖြစ် အာရုံကြော, ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းသည်သင်လိင်မဆက်ဆံခြင်းနှင့်တူညီသည်။ ဤသည် Prause / Ley အားဖြင့်2အဓိကတောင်းဆိုချက်များ debunks:
၁)porn လေ့လာမှုများတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဘို့ကိုထိန်းချုပ်ရပါမည်။“ porn ကိုကြည့်သည့်အခါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အကြိမ်ရေနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းရန်မလိုပါ၊
ဒါက 2) ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ညစ်ညမ်းသောကြည့်ရှုခြင်းသည်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူမဟုတ်ကြောင်းပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်စွဲလမ်းမှုဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဒီကိစ္စကိုအရေးပါသလဲ ချီးမွမ်း ၂၀၁၅ EEG လေ့လာမှု“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာစွဲလမ်းမှု” အနည်းငယ်အစီရင်ခံတင်ပြ နည်းသော ဦးနှောက်ကို activation အဆိုပါမကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများသည်အတွက် vanilla porn ၏ပုံရိပ်များကိုကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာ။ Prause porn ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ခဲ့တဲ့ဟုဆိုကာဤစွဲမော်ဒယ်၏ဆန့်ကျင်ဘက်ကပြောပါတယ် cue တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများအတွက်။ (စွဲသူများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အသုံးပြုရန်အတွက်လိပ်ခေါင်းတုံ့ပြန်မှုပိုမိုများပြားသည် - ဥပမာအဖြူရောင်အမှုန့်များကိုတွေ့ရသောကိုကင်းဆေးစွဲသူများသည်ကျန်းမာသန်စွမ်းသောထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ဦး နှောက်ကိုပိုမိုထိရောက်စွာအသုံးပြုခြင်းဖြင့်တုံ့ပြန်မှုသည်အမှန်တကယ်အသုံးပြုခြင်းထက်) ကိုး peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများသူမ၏နိဂုံးချုပ်အကြောင်းကို Prause နှင့်အတူသဘောမတူခဲ့ကြ, porn ကြည့်ရှုသည်ဟုဆို is မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့် Prause ၏မကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများသည် vanilla porn ကိုစိတ်မသက်မသာဖြစ်စေခြင်း (သို့) လေ့ကျင့်ခြင်းများကြောင့် ဦး နှောက်ကိုလှုပ်ရှားစေသည်။ သူတို့ပျင်းခဲ့ရတယ်။ လေ့လာမှုတစ်ခုကသူမရဲ့သီအိုရီကိုတိုက်ရိုက်ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းစွဲလမ်းဖြစ်နိုင်သလား? ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်ကုသမှုရှာကြံယောက်ျားတစ်ဦး fMRI လေ့လာမှု။
“ မှကောက်နှုတ်ချက်”လိင်လိုသောကြောင့်ရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်. လူ့ cortex cerebri ၏ functional neuroanatomy":
လိင်စိတ်နိုးထလိင်ဖြစ်စေအခြားတစ်ဦးချင်းစီသို့မဟုတ် masturbatory နှင့်အတူရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်အင်္ဂါထိတွေ့မလိုအပ်ပါဘူးရှိခြင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်ရှိရာလက်ရှိအယူအဆရေးရာမူဘောင်အတွက်။ ညစ်ညမ်း၏စံနမူနာယူပါ။ အဲဒါကို access ကိုရဖို့ရန်နည်းလမ်းများစဉ်းစား, ဒါမှမဟုတ်တက်ကြွစွာပါကရှာဖွေနေနှင့်ဖြစ်ကောင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကာလအတွင်းအလိုဆန္ဒကြုံနေရ, ချို့တဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစဉ်းစားသည်။ ရွေးချယ်ထားသည့်ညစ်ညမ်းပစ္စည်းအကဲခတ်ပင်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းမရှိဘဲ, လိင်အင်္ဂါ arousal လည်းမရှိသည့်အခါ "လိင်ဆက်ဆံ" စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးချင်းစီ (မျှပြင်ပရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်နှင့်အတူ) သက်သက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်အားအားဖြင့်လိင်စိတ်နိုးထသို့မဟုတ်ပင်အော်ဂဇင်အောင်မြင်ရန်သည့်အခါထိုနည်းတူစွာ, ဤသည်လည်း (Komisaruk နှင့် Whipple, 2011) "လိင်ဆက်ဆံ" အဖြစ်ငျြးပွညျ့မီ။